Funda uMatshini wokuFunda. Izixhobo, imizekelo kunye nezifundo - Ikkaro
yokuqalisa >> U kufunda
Ubukrelekrele bokwenza, ukufunda ngomatshini, ukufunda okunzulu. Zonke ziyikhonsepthi eyandayo. Kubonakala ngathi yinto evela kwikamva, kodwa isetyenziswa ngakumbi nangakumbi kuzo zonke iinkalo zobomi. Hayi kwi-Intanethi kuphela, hayi kumbono wekhompyuter kuphela. Bafumanisa ukugula, ukuphucula iingxaki, ukuqhuba iimoto kunye nezinye izinto
Asiyi kupapasha iindaba. Siza kuzama ukufumana ulwazi oluluncedo njengesiqhelo e-Ikkaro. Ukuqokelela izixhobo, ukuzama ukucacisa iikhonsepthi, ukwenza imizekelo yokufunda ngoomatshini. Izicelo kumacandelo ahlukeneyo, anje nge-IoT, kunye nalo naluphi na ulwazi lwedatha olufumanayo.
Andiyongcali. Ndikwinkqubo yokufunda kodwa ndiyakholelwa ukuba ndinganegalelo kulwazi endilufumanayo kwaye ndiphucule ngalo.
Ndenze ikhosi yonjiniyela ye Ikhosi yokuPhazamiseka kweMatshini kaGoogle. Ikhosi yokwazisa, apho bakunika khona iziseko kwaye babone imizekelo yokuphunyezwa kwenyani ngeTensorFlow. Le mizekelo yeyona indikhuthazayo ukuba ndenze njalo.
Ukusebenzisana, okwabizwa ngokuba I-Google Colab Yimveliso yoPhando lukaGoogle kwaye isetyenziselwa ukubhala nokuqhuba iPython kunye nezinye iilwimi ezivela kwisikhangeli sethu.
IColab isingathwe nguJupyter'
Isebenza ngokuchanekileyo njengeJupyter, uyabona inqaku lethu. Zincwadi zamanqaku okanye iincwadana zokubhala ezisekwe kwiiseli ezinokuba yimibhalo, imifanekiso okanye ikhowudi, kweli nqanaba lePython, kuba ngokungafaniyo neJupyter Colab okwangoku kuphela enokusetyenziswa yi-Python kernel, bathetha ngokuphumeza ezinye kamva ezinje ngeR, Scala, njl. , kodwa akukho umhla uchaziweyo.
Iikhosi zokufunda uMatshini wokuFunda, ukuFunda okunzulu kunye nobukrelekrele bokwenza
Ezi zezona zixhobo zibalaseleyo ndizifumanayo zokufunda ngokuFunda ngomatshini, ukuFunda okunzulu kunye nezinye izihloko zeArtificial Intelligence.
Kukho iikhosi zasimahla nezihlawulelweyo kunye namanqanaba ahlukeneyo. Ewe kunjalo, nangona zikhona ezinye ngeSpanish, uninzi lwazo lungesiNgesi.
Ndizahlulahlule kwizifundo ezifutshane (ukusuka kwi-1 kuye kwiiyure ezingama-20) Ezi zezokunxibelelana okokuqala nomxholo.
Isingeniso kuMatshini wokuFunda nguKaggle Mfutshane, ziiyure ezi-3 kuphela
Ikhosi yokuKhubazeka yokufunda nguGoogle ngeTensorFlow APIs (iiyure ezili-15). YENZIWE. Apha uphononongo
Ukwazisa ukuFunda okunzulu nguKaggle Iiyure ezingama-4 zokufunda i-DL kunye neTensorFlow. Funda ezona zimvo ziphambili zokuFunda koMatshini kwaye wakhe iimodeli zakho zokuqala.
Iiklasi zeStanford IA umbono Uluhlu lweYouTube lweeklasi zeStanford zokufunda umbono wekhompyuter kunye ne-AI (iiyure ezingama-20)
Intshayelelo yeMfundo enzulu nge-MIT. Le yenzelwe abafundi okanye abafundi bangaphambili kodwa sinokubona iividiyo zeeklasi.
Izinto ze-AI. Isingeniso sasimahla kubukrelekrele bokuzenzela obungengcali zeNON yiYunivesithi yaseHelsinki.
Ukujonga idatha yezembali ebonelelwe nguloo meteorological wokujonga esixekweni sam, ndiyabona ukuba Banikezela kuphela ngemizobo kunye nokukhuphela njengePDF. Andiqondi ukuba kutheni bengakuvumeli ukuba uzikhuphele kwi-csv, eya kuba luncedo ngakumbi kuye wonke umntu.
Ke bendikhangela enye Isisombululo sokudlulisa ezi tafile ukusuka kwi-pdf ukuya kwi-csv okanye ukuba umntu othile ufuna ukufomatha i-Excel okanye iOfisi yeLibre. Ndiyayithanda i-csv kuba nge-csv wenza yonke into onokuyiphatha nge-python kunye neelayibrari zayo okanye ungangenisa ngokulula kuyo nayiphi na ispredishithi.
Njengombono kukufezekisa inkqubo ezenzekelayo, into endiyifunayo siskripthi sokusebenza nePython kwaye kulapho uTabula engena khona.
Uyifaka njani iKeras kunye neTensorFlow ukusuka kwi-backend kwi-Ubuntu
Emva kokugqiba Inkqubo yokuFunda ngomatshini, Bendijonge apho ndiza kuqhubeka khona. Imeko zophuhliso ezisetyenzisiweyo kwikhosi ye-Octave / Matlab prototyping ayisiyiyo into esetyenziswa ngabantu, ke kuya kufuneka utsibele uye kumgangatho ophezulu. Phakathi kwabagqatswa ekucetyiswe mna kakhulu kukuba Iikhamera, zisebenzisa umva weTensorFlow. Andizukuya nokuba iiKera zibhetele kunezinye izixhobo okanye ezinye izikhokelo okanye nokuba ukhetha iTensorFlow okanye iTherano. Ndiza kuchaza nje ukuba inokufakwa njani ku-Ubuntu.
Kuqala ndizamile ukuyifaka kumaxwebhu amaphepha asemthethweni, kwaye bekungenakwenzeka, bendihlala ndinempazamo, umbuzo ongasombululwanga. Ekugqibeleni ndaya kufuna izifundo ezithile ngendlela yokufaka iicamera ku-Ubuntu Kwaye ndichithe iintsuku ezimbini ndichitha ixesha elininzi ebusuku. Ekugqibeleni ndiyifumene kwaye ndikushiyela indlela endenze ngayo ukuba inokuthi ikulungiselele indlela.
Njengoko siza kulandela amanyathelo acetyiswa ziiwebhusayithi endikushiya kwimithombo ekupheleni kwesifundo, siza kufaka iPIP ebendingenayo, ukulawula iiphakheji. kuba ekugqibeleni Kwi-linux yile nto kanye, inkqubo yolawulo lwephakheji ebhalwe kwi-python.
Sudo apt-fumana ukufaka i-python3-pip sudo apt faka i-python-pip
Ndiyigqibile i Inkqubo yokuFunda ngomatshini enikezelwa yiYunivesithi yaseStanford eC Coursera, Kwaye ekubeni sele bebaninzi abakhe bandibuza ngokuphandle nangokuzimeleyo malunga nayo, bendifuna ukunika inkcukacha ethe kratya malunga noko ibibonakala kum kwaye nokuba ngubani na ogqiba ukuyenza uyazi ukuba bazokufumana ntoni.
Yiyo ikhosi yasimahla kuFundo loMatshini, Ufundiswe nguAndrew Ng. Nje ukuba ugqibile ukuba ufuna ukuba nesatifikethi esivumela izakhono ezifezekisiweyo nge- € 68. Yahlulwe yaziintsika ezi-3, iividiyo, iiMviwo okanye iiQuizz kunye nokwenza umthambo. Kungenxa yesiNgesi. Unemibhalo engezantsi kwiilwimi ezininzi, kodwa iSpanish ayilunganga kakhulu kwaye ngamanye amaxesha iphelelwe lixesha, kungcono ukuba uyifaka ngesiNgesi.
Kuyinto ethe cwaka. Kodwa mhlawumbi yiyo loo nto kubonakala ngathi yindlela elungileyo yokuqala kuba awuzukufunda kuphela into ekufuneka uyenzile kodwa kutheni uyenza.